Ka hor inta aynaan bilaabin, note deg deg ah ku files torrent. Sida laga soo xigtay Wikipedia, file a torrent ka kooban yahay URLs ee trackers badan; metadata muhiim ah oo ku saabsan dhammaan files warbaahinta in laga soo degsan iyo metadata dheeraadka ah lagu qeexay kordhin in faahfaahinta BitTorrent iyo sidoo. Si kale haddii loo dhigo, file torrent ah waa uun weel xogta taas oo awood u BitTorrent si aad u hesho bartilmaameedka iyo buuxiso download ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa aanu ku jira content warbaahinta oo dhan. Sidaa darteed, marka aan ka hadleyno 'files torrent play', waxaan ula jeednaa dhab ahaantii file ka soo dejisan warbaahinta (s), ku kordhin ah oo sida caadiga ah ku jira, AVI ka MKV ama qaab MP4. Waa hagaag, hadda in aad ogtahay waxoogaa ku saabsan daadkii, aynu aad u bilowdo.
No.1: Video Converter - wejiyo Torrent Player
The Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ), waa in ka badan ciyaaryahan torrent boosaska badan. Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamadda oo lacag la'aan ah iyo ciyaaro files torrent aad in uu ku kaydsan qaabab kala duwan. Haddii aad rabto in aad hesho sida ugu badan uga faylasha torrent sida diinta video, video download, video tafatirka ama gubasho DVD ama iwm, wax walba oo aad sameyn karto si toos ah it on.
Iyadoo decodes kala duwan oo ey ku, uma baahnid inaad si loo soo dajiyo codecs kasta ama surin-tago marka gebi ahaanba ciyaaro qaabab kasta oo file (sida xaqiiqada ah oo ay ku jiraan AVI, MKV, MP4 iyo iwm).
Cross-madal: Windows 8/7 / XP / Vista; Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6.
Sawirka: aad qaadi karto si dhekhso ah goobta aad jeceshahay marka ciyaaro files torrent.
Dajinta, waxaad ka YouTube oo kale goobaha video-wadaaga soo bixi kartaa videos
Duubista: haddii websites aad daawashada hana u oggolaan in dajinta, waxaad riixi kartaa Record si aad u hesho duubo oo tayo fiican leh.
Hawlaha tafatirka Common: goo, dalagga, kala, ku dar subtitles iyo iwm
Diinta Xoog leh oo tayo leh sameecadda ah oo waafaqsan sare, si aad u hesho liiska dhammeystiran ee video caadi ah ama audio iyo video HD badalo kartaa file torrent aad soo bixi; Waxa kale oo noocyo kala duwan oo qalab ah sida iPhone, iPad, iPod, HTC, Blackberry, iRiver, kamidka ah iyo iwm
( Fiiro gaar ah , waayo, version maxkamad lacag la'aan ah, waxaa jiri doono diinta fter watermark)
NO.2: Wondershare Player- A Free iyo Easy in la isticmaalo Torrent Player
The Wondershare Player waa miisaanka, awood badan oo halkaas ka ciyaari kara ku dhowaad kasta oo warbaahinta format. Kale ee ka badan inuu u ciyaaro DVDs, waxaa kaloo loo isticmaali karaa sida decoder maqal ah. On top of in, waxa aanu u baahan tahay wax codecs dibadda ama dheeraad ah si uu ugu tartamo.
Loo maqli kalsoonaan karo oo ah files kala duwan oo ay ku jiraan DVD multimedia, HD video, SD video iyo maqal ah; iyada oo aan la codecs dheeraad ah ama fur-tago loogu baahan yahay.
Saciira-degdeg ah loo maqli karo ee dhammaan faylasha warbaahinta la jirayba waxay ugu technology ba'an X; videos bilaabi isla iyo muuqan ciyaaro.
Samatabbixi Raaxaynay tiyaatarka-sida xal indhaha; raaxaysan HD tayo leh la dhalaalayay faahfaahinta fiiqan, damacyadii macaan oo midabo kala cad ah.
Naqshado dareen la interface uncluttered; waxay bixisaa hawlaha dheeraad ah iyo goobaha ay gacanta midig ee farahaaga.
NO.3: VLC - A Torrent Universal Player
VLC , marka hore la sii daayay sanadkii 2000 waa cusub marka la barbar dhigo ciyaartoyda kale ee warbaahinta, laakiin waxa ay sidoo kale ka mid ah kuwa ugu caansan. Waa ciyaaryahan ku qasban tahay ayaa torrent iyo aad marar badan maqli doonaa VLC marka ay codsanayaan qof saabsan media player jecel.
An furan-il, ee aadka loo qaadi karo ciyaaryahan warbaahinta xorta ah.
Cross-madal: Windows, Mac OS X, Linux, macruufka iyo iwm
Soo diyaariyeen A badan ee qaabab ay taageerayaan oo ay ku jiraan AVI, MKV, MP4, 3GP, ASF iyo qaabab dhammaan caadi ah oo caan ah, gaar ahaan il video bixi internetka.
Sababo la xiriira qaab dhismeedka baakadka ku salaysan ay, waxa ay ka ciyaari karaan content video, xataa haddii uu burburay, aan dhamaystirnayn ama diiqid (ie waxaad ka ciyaari kartaa filim durdurkii halka uu weli soo degsado)
No.4: KMplayer - A iminka Torrent Player
KMplayer , sidoo kale loo yaqaan K-Guddomiyeyaasha Player, waa audio iyo video ciyaaryahan miisaanka for Windows (Win2000 / XP / 2003 / Vista / 7). Waxaa gebi ahaanba bilaash ah oo taageera tiro balaadhan oo ah qaabab file kala duwan oo ay ku jiraan AVI, MKV, MP4, wmv, FLV iyo wax ka badan.
Brilliant interface: nadiif ah oo qabow. Waxa aad dhakhso u heli karaan fursadaha ciyaaryahan video ku qasabno yar gudahood.
Aadka customizable: aad sameyn kartaa audio iyo video saamaynta badan (ie 3D), hoos ama la kordhiyo xawaaraha loo maqli karo, qaybaha doorashada ee video ah sida ugu cadcad, samayn kala duwan AB Celin, dooro hargahood oo aad jeceshahay, iyo tallaabooyin midabka.
Radidiyaha waa hufan, iyadoo ugu fiican tiknolojiyada video processing, waxa ku siinayaa waayo-aragnimo aan horay loo arag u ciyaaro files torrent aad.